Cpu အကြောင်း သိချင်လို့ပါ - MYSTERY ZILLION
Cpu အကြောင်း သိချင်လို့ပါ
October 2008 edited July 2010 in Help Desk
I would like to know the different between dual core, core2duo and quad core. If anyone knows, please explain me detail or please give me links to read about it.
Intel က တစ်ခြားတစ်ခြားသော CPU တွေအကြောင်းသိချင်ရင် ဒီကို သွားကြည့်လိုက်နော်........
Istein ရေ internal အသေးစိတ်သိချင်တာဆိုရင်တော့
Internal Structure အကြောင်းသင်ထားမှတ်ထားတာကို သိသလောက် ရေးပေးပါမယ်။
(တော်တော် လျှာရှည်ပြီး ရေးပြရမှာမို ့)
မဟုတ်ဘူး ကိုသာသာရေ ကျနော်သိချင်တာက core2Duo နဲ့ Dual core ဆိုတာဘာကွာလဲ။ Dual core ိုဆိုရင် CPU နှစ်လုံးစိုက်ထားတာလား (သို့) CPU တလုံးထည်းက နှစ်လုံးစာ အလုပ်လုပ်တာလား အဲဒါလေးသိချင်တာပါ။ ရိုးရိုး စီပီယူ တွေက စပိ 3.sth GB ကျော်နေပေမဲ့ dual core ကတော့ 2GB အောက်ရောက်နေလို့ အဲဒါဘာကြောင့်လဲသိချင်လို့
http://howstuffworks.com မှာသွားရှာကြည့် သူ့ဆီမှာ ပြည့်စုံတယ်။ ဟိုး အပ်က စပြီး လွန်းပျံထိ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲ ဆိုတာ တွေ ရှိတယ်။
နောက်တစ်ခု လဲ ehow မှာတွေ့လို လင့်တင်ပေးလိုက်တယ်။ ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။ ပေါက်သွားရင်၊ ပြန်ရှင်းပြပေးပေါ့လေ။
Coreв„ў Duo is simply the name of IntelвЂ™s dual core CPU.
A dual core CPU has two processors on one chip. ItвЂ™s faster than having two separate CPU chips since the data between them does not need to go onto the system bus.
And actually, there is no duo core.
ကျွန်တော်က Hyper-threading နဲ့ Dual Core ကိုတော့ ခွဲခွဲခြားခြား သိတယ်ဗျ။ Hyper-threading ကတော့ CPU တစ်လုံးထဲ Core တစ်ခုတည်းက နှစ်ခုပုံစံမျိုးထားပြီး တစ်လှည့်စီ Run ပေးတယ်ဗျ။ Dual Core ကတော့ Core နှစ်ခုနဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း နှစ်ခု တစ်လှည့်စီမဟုတ်ပဲ Run ပေးတယ်ဗျ။ Multitasking ပေါ့ဗျာ ...
Core2Duo, Centrino2စသည်ဖြင့်2သို့မဟုတ် Duo ပါတာ ဟာ
CPU ထဲမှာ Core ၂ ခု ပါတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။ Quad ဆိုရင်တော့
CPU ထဲမှာ Core ၄ ခု ပါတယ်ပေါ့။ ဖော်ပြပါ နာမည်တွေဟာ Intel ရဲ့ Brand နာမည်တွေသာဖြစ်ပါတယ်။
Dual Core ဆိုတာကတော့ CPU Chip တစ်ခုတည်းမှာ
Core နှစ်ခုပါတာကို ခေါ်တဲ့ generic name ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တော့ Dual ပဲဆိုဆို Duo ပဲဆိုဆို Core2ပဲဆိုဆို တူတူပဲထင်ပါတယ်။
Speed အကြောင်းကတော့ ဆရာပြောပြတာကို ရေးတေးတေးပဲမှတ်မိပါတော့တယ်။
ကျွန်တော် နည်းနည်း ပြန်ရှာကြည့်ပါဦးမယ်။ Core22.4 GHz ဟာ Single Core 3.0 GHz ထက်တော့ ပိုမြန်ပါတယ်။ ၂၀၀% တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ၁၆၀% သို့မဟုတ် ၁၇၀% လောက်တော့
ကျွန်တော် သိချင်တာ တစ်ခု ထပ်ပေးမယ်နော် .... Dual Core CPU တွေနဲ့ Core2Duo ဘာကွာလဲဗျ ...
Dual Core CPU က chip တစ်ခုထဲမှာ စီပီယူနှစ်လုံးပါပြီး Core2Duo ကတော့ chip တစ်ခုမှာစီပီယူလေးလုံးပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။Duo core နှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းစိုက်ထားသလိုပေါ့ဗျာ။ဖြစ်နိုင်တယ်ထင်တာပြောတာပါ။ မှားနေရင်တော့ MZ Member များစေတနာရှေ့ထားပြင်ပေးကြပါဗျား။:d
Core2Duo ကတော့ chip တစ်ခုမှာစီပီယူလေးလုံးပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ :103:
အဲသလိုဆိုရင် Core2Quad ကတော့ CPU ၈ လုံးဖြစ်နေမှာပေါ့။
Core2Duo ဟာ ၂ လုံး။ Core2Quad စာ ၄ လုံးပါ။
ကျွန်တော် သိသလောက် ပြောကြည့်မယ်နော်...
Dual Core ဆိုတာကတော့ CPU ၂ လုံးနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ CPU ၂ လုံးကို cache2ခုနဲ့ပေါ့။ Core2Dual ကတော့ CPU ၄ လုံးမဟုတ်ဘူး။ CPU ကတော့ ၂ ခုပဲ။ ဒါပေမယ့် core ကတော့ ၄ ခုဖြစ်သွားမယ်။ cache ၂ ခုပဲလို့ထင်တယ်။ သူက Quad Core အစစ်မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် Core2Dual လို့ခေါ်တာဖြစ်မှာပါ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ပိုရှုပ်လာသလိုပဲ .... :43:
ပြောပြပေးသွားတဲ့ Bro အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီဆိုတော့ ဘာကမှန်လဲမသိတော့ဘူး .... အားလုံးကလဲ ပညာရှင်တွေပဲဆိုတော့ ..... ........
ကျနော်လဲ သိချင်နေတာတော်တော်ကြာပါပြီ ... လက်လှမ်းမှီသလောက်လဲ လိုက်ဖတ်ပါတယ် ... ဒါပေမဲ့ ... ခုထိ သေချာမသိသေးဘူးဗျ .... ရှေ.က Bro တွေပြောသွားသလိုပဲ ကျနော့် Brain မှာလဲ ... ခုထိ ရောထွေးနေတုန်းပဲ ... ... ...
သေချာ ... တိကျ ... ရှင်းလင်း ပေးကြပါဦးနော် .... ကျနော်စောင့်ဖတ်နေမှာပါ ......
Thread ဖွင့်ပြီးမေးတဲ့ Istein ကော ဖြေပေးကြတဲ့ Bro တွေ အားလုံးကော .... ကျေးဇူးပါ ... :77::)
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုစေတန် ရှင်းသွားတာအမှန်လို့ထင်ပါတယ် ... \_:d/
ကျွန်တော်ကြားဖူးတာကတော့ dual core က ရိုးရိုးcpu တစ်လုံးထဲ လေ ...ဒါ ပေမဲ့ core2duo ကကျတော့ dual core ရဲ့နှစ်စ......dual core ရဲ့ 4.0 GHz က core2duo ရဲ့ 2.0Ghz ပဲရှိတယ်လို့ကြားဖူးတာပဲ....ကျွန်တော်ခုပြောနေတာကြားဖူးနားဝတွေဖြစ်လို့မှားခဲ့ ရင် လည်း mz member များပြင်ပေးကြပါနော် :6:
ကို သားသားပြောသွားတာမှန်မယ်ထင်တယ် ....ဗျ )
ခင်ဗျားပြောတာ ကျွန်တော် တောင် ပိုရှုပ်သွားပြီ။
Task Manager မှာ CPU Usage History window ၂ ခုပေါ်ရင် Core ၂ ခု၊ ၄ ခုပေါ်ရင် Core
၄ ခုလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင် Core2Dual စက်ပေါ်က Task Manager ကိုဖွင့်ကြည့်
လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ တော်တော်ရှင်းသွားမယ် ထင်တယ်။
Duel Core သို ့မဟုတ် Core Duo ဟာ Pentium Series ဖြစ်ပြီး (Logo မှာရေးထားပါတယ်) Core ၂ ခုနဲ့32 Bit / 64 Bit အလုပ်နိုင်ပါတယ်
Intel ရဲ ့ပထမပိုင်း CPU တွေ ဟာ Core တစ်ခုတည်းနဲ ့အလုပ်တာပါ..
ကျွန်တော်နားလည်သလောက်ပြောရရင် အလုပ်တစ်ခုကို လက်တစ်ဘက်တည်းကိုင် လုပ်တာနဲ့လက်နှစ်ဘက်နဲ့ကိုင်လုပ်တာ ကွာတာပါ၊ အလုပ်တစ်ခုကို နှစ်ပိုင်းခွဲပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့သဘောပေါ့....
အဲလိုနှစ်ပိုင်းခွဲ လုပ်တဲ့အတွက် Energy အကုန်သက်သာစေပါတယ်...
Core နှစ်ခုပါလို ့၂ ဆပိုပြီး မြန်မလာပါဘူး၊ မြန်တာနှေးတာဟာ Clock Speed နဲ့Cache တွေအပေါ်မှာ ဘဲ မှီခိုပါတယ်...
Core2Duo ကတော့ Core2Series ဖြစ်ပြီး Core ၂ ခုနဲ့64 Bit အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်.
အမှားပါရင် ကျွန်တော်ညံ့လို ့ပါ:D:D:D
ကဲ အခု D ပြသနာကိုရှင်းဖို့ ကျွန်တော် နည်းနည်း စာဖတ်လိုက်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ Intel Core Duo ရဲ့ Web Page မှာ ရှိတဲ့
ထဲမှာ ယခုလို ရေးထားပါတယ်။
The Intel Core Duo processor includes two mobile-optimized
execution cores inasingle processor. This design enables
execution of parallel threads or applications on separate cores
with dedicated CPU resources. The results enable outstanding
dual-core performance and greater system response when
running multi-threaded or multiple demanding applications
ဒါ့ပြင် ဖော်ပြပါ ပုံထဲမှာ ယခုလိုရေးဆွဲထားပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် Duo ပဲခေါ်ခေါ် Dual ပဲခေါ်ခေါ် Processor Chip တစ်ခုထဲမှာ
Core2ခုပါ၀င်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒါ့ပြင် အထက်ပါပုံအရ Cache ဟာ Separate
မဟုတ်ဘဲ၊ shared သာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဒါနဲ့ နောက် Intel Core2Duo product page ကိုကြည့်ရာမှာ ယခုဖော်ပြပါ ဖိုင်ထဲမှာ
Intel’s new 45nm manufacturing technology, with hafniuminfused
Hi-k transistors, enables even more processor
performance by doubling the transistor density, improving
efficiency and speed relative to the previous generation,
and increasing cache size by up to 50 percent. These new
Intel Core2Duo processors deliver more performance
အထက်ပါ အရ Core2Duo ဟာ Core Duo product line ရဲ့ Version2ဖြစ်ကြောင်း
သိရပါတယ်။ Core2Duo ဟာ Core Duo လိုပဲ Shared Cache နဲ့ Core ၂ လုံးပါပြီး၊
nano meter scale, number of transistors, cache size နဲ့ energy efficiency
ဒါ့ပြင် ၄င်း ဖိုင်ထဲတွင်ပင် Core2Duo ၏ Feature များကိုဖော်ပြရာတွင်
Dual-Core Processing : Two independent processor cores in one physical package run at the same frequency, and share up to6MB of
L2 cache as well as up toa1333 MHz Front Side Bus, for truly parallel computing.
ထို့ကြောင့် Core Duo နှင့် Core2Duo တို့၏ Product များကို လေ့လာကြည့်ရာတွင်
Core Duo သည် 65nm (nano meter) နှင့် ထုတ်လုပ်သော ပစ္စည်းများသာဖြစ်ပြီး၊
Core2Duo သည် 65nm နှင့် 45nm ကိုသုံးကာ ထုတ်လုပ်သော ပစ္စည်းများဖြစ်ကြောင်း
တွေ့ရ၏။ အောက် Link များတွင်ရှုလေ။
အထက်ပါဖော်ပြချက်များ အရ အောက်ပါ မှတ်ချက်များ ရရှိပါသည်။
၁။ Dual-Core ဆိုသည်မှာ product ကိုဆိုခြင်းမဟုတ်။ နည်းပညာကို ဆိုခြင်းဖြစ်၏။ ၄င်း၌
CPU Chip တစ်ခုထဲတွင် Core ၂ ခုပါ၀င်ပြီး။ မျှေ၀သုံးသော Cache တစ်ခုပါ၀င်၏။
၂။ Core Duo ဆိုသည်မှာ Dual-Core နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသော Intel ၏ product
၃။ Core2Duo ကား Core Duo အား မွမ်းမံပြုပြင် ထုတ်လုပ်လိုက်သော အမျိုးအစားအသစ်
သာဖြစ်၏။ ၄င် အမည်တွင်ပါ၀င်သော2ကား Version နံပါတ်ကို ဆိုလိုရင်းတည်း။
၄။ Dual Core ဟုဆိုဆို၊ Duo Core ဟုဆိုဆို၊ Core2ဟုဆိုဆို Core ၂ လုံးပါသော CPU ကို
၅။ အထက်ပါ အချက် ၂ နှင့် ၃ ကို အခြေခံပြီး Core2Quad ဆိုသည်မှာ Core Quad ၏ Version 2
သာဖြစ်ကြောင်း။ Quad ဟူသော စာလုံးအရ Core ၄ ခုပါကြောင်း မှတ်ယူနိုင်၏။
ယခု ယူဆသော မှတ်ချက်မှား သဘာ၀ကျမည်ထင်ပါသည်။ ဆွေးနွေးကြပါကုန်။
Can u explain how core i7 work too? The FSB information is not provided in သင်္ကြန်မိုးရည် reply or is it usinganew technology? :39:
and i seeanew term "intel quick path interconnect speed" what is it?
ဒါနဲ ့core i7 ကြတော့ရော core7ခုရှိတာလား
ဝင်ဖောမလို့ဟာကိုရှေ့ကဆရာသမားတွေရှင်းထားတာတွေက အရမ်းကို ရှင်းလွန်းလို့ (နောက်တာမဟုတ်ပါအတည်ပြောတာပါ newbies တွေအတွက်တစ်ကယ်အကျိုးရှိပါတယ်) ကျွန်တော်လဲဖောခွင့်မသာလိုက်ပါကြောင်း:D
အစ်ကိုစာရေးတာက newbies တွေအတွက်နားလည်လွယ်တယ်
nope.. just4cores.. but dont know how is it work...
anyone please explain???
I would like to know the different between dual core, core2duo and quad core.
Dual core ကတော့ Hyperthreading နည်းပညာ ဖွံဖြိုးမှု အစပိုင်းမှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ cpu တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Hyperthreading ရဲ့ သဘောတရားက processor တစ်လုံးတည်းကို processor နှစ်လုံးတပ်ထားသလို ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သဘောကတော့ သာမန် processor တစ်လုံးထက် နှစ်ဆ အလုပ်လုပ်တယ်လို့ ထင်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ architecture state ကို ပုံတူပွားပြီး logical processor ၂ ခုဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတာမျိုး ဖြစ်ပြီး physical processor တစ်ခုတည်းမှ cache, control unit စတဲ့ အခြား resources အားလုံးနီးပါ မျှေ၀သုံးစွဲ ရပါတယ်။ ဒီအတွက် အမှန်တကယ် processor2လုံး တပ်ဆင်ထားသလိုတော့ ရာနှုန်းပြည့် မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး။
Core2 Duo လည်း ဒီသဘောအတိုင်းပါပဲ။ ကွာတာတွေတော့ ရှိပါတယ်။ သဘောတရားကတော့ cpu ၂ လုံးစာ အလုပ်လုပ်တယ်။
Core2Quad ကတော့ ၄ လုံးစာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Core2Extreme ကတော့ ၈ လုံးစာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Core i7 ကလည်း ၈ လုံးစာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သို့သော် သူကတော့ socket 1366 သုံးထားပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အပေါ်က cpu အမျိုးအစားတွေကတော့ socket 775 သုံးထားပါတယ်။
Core ဆိုတာက ဘာလဲဗျ။
အများကြီးရှင်းပြသွားတာ နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Core ဆိုတာက ဘာလဲဆိုတာကိုမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။
ပြီးတော့ Cache ရယ် Bus ရယ် အဲဒါလေးတွေပါရှင်:ပြပေးပါ ခင်ည။
cpu ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာတကယ်အလုပ်လုပ်ပေးရတဲ့ unit ကိုဆိုလိုပါတယ်
Cache ဆိုတာကတော့ cpu ရဲ့အနားကယာယီ data သိုလှောင်တဲ့နေရာလေးပေါ့
သူရှိတဲ့အတွက် cpu ရဲ့စွမ်းရည်ဟာမြင့်တက်လာပါတယ်......
cache ရှိတဲ့အတွက် northbridge ကိုလဲအလုပ်သက်သာစေပါတယ်
DRAM ရဲ့ Wait State ကိုလဲရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်......................
Bus ဆိုတာကလည်း Computer အတွင်းမှာတစ်နေရာမှတစ်နေရာကို
Corei7 processors have an addional cache called L3 Cache of 8mb,(except for Mobile Family)
Think of the northbridge asaconnecting directly to CPU via the front side bus (FSB). On the northbridge, there'samemory controller for the CPU to access, and it also connects to the AGP or PCI Express bus.
On the other hand, the southbridge has no direct connection to the CPU. Information must pass through the northbridge before reaching the southbridge. Buses that connect directly to the southbridge include the PCI bus, USB ports IDE or SATA connections.
It is helpful to keep in mind that all communication that happens inacomputer is no more than electrical signals, and that these signals only do any significant work because of the clever arrangement of circuits. So, while realisticallyamotherboard is just the electronic highways for the electronic currents to get fromacomponent to another component. However, this does not do the motherboard and its parts justice. It isavery complex task to move signals in the right order, and in the right manner, to the right recipient. Also, to complete the job of connecting all these components together, the motherboard includes two special processors that work on controlling the communication of data to and from all the devices in the computer. These chips are called the northbridge (which can communicate with the CPU, RAM and usually Video) and the southbridge (which communicates with all other devices) because of their position on the motherboard (the northbridge is closer to the boards “top” while the southbridge is closer to the “bottom”). Although, not all motherboards work this way; some put the functionality of both chips into one.
Actually, Corei7 has4cores onaSingle-die device: all four cores, the memory controller, and all cache are onasingle die, instead ofaMulti-chip module of two dual-core dies as in Yorkfield (Xeon,Core2Quad,Core2Extreme,four core microprocessors)
When HyperThreading is Enabled, certain sections of the processor—those that store the architectural state—are duplicated, except the main execution resources. This allowsahyper-threading processor to appear as two "logical" processors to the host operating system, allowing the operating system to schedule two threads or processes simultaneously.
To explain in the simplest form, hyperthread can fool the OS that the CPU has 8 cores.
And the OS will consider all those logical processors into account.(Thus,showing 8 cores in Task Manager).
There are three Corei7 Desktop Families plus two Corei7 Mobile Families.
DesktopFamilies are :
This family includes2processors.
Core i7-870 ($562)
This family includes4Corei7 processors.
Core i7-920 ($284)
Core i7-940 ($562)
Core i7-950 ($562)
Core i7-960 ($562)
This family includes2Corei7 processors.
Core i7-965 Extreme Edition ($999)
Core i7-975 Extreme Edition ($999)
Mobile Families Are :
This family includes2Corei7 processors
Core i7-720QM ($364)
Core i7-820QM ($546)
This family include only 1 Corei7 processor
Core i7-920XM ($1054) THE MOST EXPENSIVE PROCESSOR!
TAKE A LOOK AT THIS SITE TO SEE DETAILED FEATURES OF THESE PROCESSORS.
Lynnfield --- Direct Media Interface
Bloomfield --- Quick Path
Clarksfield --- DMI
Arrandale --- Direct Media Interface, Integrated GPU
Note :Arrandale is not released yet.
Core i3 ကရောဗျ...
Core i7 နဲ ့ဘာကွာတာလဲဗျ